စကားတန်ဆာအလင်္ကာ - Myanmar Network
Posted by zar ni (My Way!) on September 1, 2011 at 17:39 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ဖွဲ့ဖွဲ့နွဲ့နွဲ့ စကားပြောတဲ့အခါ စာရေးကြတဲ့အခါမှာ အလင်္ကာတွေသုံးလေ့ရှိပါတယ်။ ဘာသာစကားလေ့လာကြတဲ့အခါမှာ ပထမတော့ စကားပြောကို လေ့လာကြပြီးတော့ အဆင့်မြင့်လာတဲ့အခါမှာတော့ စာပေကိုလေ့လာတဲ့အဆင့်သို့ရောက်လာကြပါတယ်။ ဒီလိုစာပေအနုပညာကို ဖန်တီးဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ခံစားဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ရေးကြ၊ ဖတ်ကြမယ်ဆိုရင် အလင်္ကာလို့ ပြောရမယ့် Figure of speech တွေကို မသိမဖြစ် သိထားသင့်ပါတယ်။
စကားလုံးတွေမှာတိုက်ရိုက်သိနိုင်တဲ့ မူရင်းအနက် (denotation) နဲ့ ကောက်ချက်ဆွဲယူရတဲ့ (connotation) ဆင့်ပွားအနက် ရယ်လို့ရှိကြပါတယ်။ မြွေ ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ အဆိပ်ရှိသော ရှည်ရှည်မျောမျော တွင်းအောင်သတ္တ၀ါ denotation ကိုရပါတယ်။ သူ့ရဲ့နောက်ကွယ်ကမှ ကြောက်စရာကောင်းသော၊ အန္တရယ် ပေးတတ်သောအရာဆိုတဲ့ connotation ကိုလည်းရနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း အခုခေတ်ဗန်းစကားမှာ ပြဿနာ ရှာတတ်တဲ့သူဆိုရင် "ဒီကောင်ကတော့ မြွေ ပဲ" "မြွေ ဖမ်းတယ်" လို့ပြောကြတယ်မလား။
အလင်္ကာ တွေဟာ ဆင့်ပွားအနက်ကိုအဓိကယူသုံးကြတာတွေ့ရပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာပေမှာတော့ အလင်္ကာတွေ တော်တော်များများရှိပါတယ်။ အဲဒီအထဲကမှ ကျောင်းသားတွေ မြန်မာလိုသိပြီးသားဖြစ်တဲ့၊ သိသင့်တဲ့အလင်္ကာတစ်ချို့ကို ရွေးပြီး တင်ပြသွားပါမယ်။
ဆယ်တန်းမှာတုန်းက မြန်မာစာမှာ အလင်္ကာတွေအော်ကျက်ခဲ့ကြတာ မှတ်မိဦးမှာပါ။ "ဂုဏ်ရည်တူနှစ်ခုကို ထပ်တူပြု ယှဉ်တွဲသုံးနှုံးခြင်းကို ရူပကအလင်္ကာဟုခေါ်သည်" ဆိုတာလေ။ အင်္ဂလိပ်လိုတော့ metaphor ပါတဲ့။ (အသံထွက်မှားနိုင်ပါသည်။ အဘိဓါန်နှင့်စစ်ကြည့်ပါ။)
A metaphor isaliterary figure of speech that uses an image, story or tangible thing to representaless tangible thing or some intangible quality or idea; e.g., "Her eyes were glistening jewels".
ဆုပ်ကိုင်ပြဖို့ခက်တဲ့အရာကို ထိတွေ့မြင်သာနိုင်တဲ့ပုံရိပ်တစ်ခုခုနဲ့နှိင်းယှဉ်ပြလေ့ရှိပါတယ်။ သာမန်အားဖြင့်မတူတဲ့အရာနှစ်ခုကို တူသယောင် နှိင်းယှဉ်ပြလိုက်တဲ့အခါ သုံးတတ်ရင်သုံးတတ်သလောက် လှပတာကိုခံစားရမှာပါ။ မြန်မာတွေဆိုရင် ဒုက္ခပင်လယ်ဝေ တယ်လို့ပြောလေ့ရှိတယ်။ အင်္ဂလိပ်ကလည်းasea of troubles တဲ့။ ဘ၀ဆိုတာ ခရီးရှည်ပဲ။ Life isajourney. အချစ်မှာကျရှုံးခြင်း။ ရုန်းထွက်ဖို့ခက်တယ်။ Falling in love.
အချိန်ဟာငွေပဲ။ Time is money.
I can mingle with the stars, and throwaparty on Mars;
I amaprisoner locked up behind Xanax bars."
(Lil Wayne, "I Feel Like Dying")
ဂြိုလ်အင်္ဂါပေါ်မှာလ. . .
. . .ဇန်းနက်သံတိုင်နောက်ဆီက
"Time isadressmaker specializing in alterations."
(Faith Baldwin, Face Toward the Spring, 1956)
အချိန်ဆိုတာ ပုံစံပြောင်းရာမှာကျွမ်းကျင်တဲ့ အပ်ချုပ်သမားပဲ။
အသုံးအများဆုံးအလင်္ကာတစ်ခုပါပဲ။ လူနှစ်ယောက်မတည့်ဘဲခဏခဏရန်ဖြစ်ကြရင် " ကြွက်နဲ့ကြောင်အတိုင်းပဲ။"
ရွှေလမင်း ပုံနှယ်" တို့ ဦးပုံညရဲ့ ရေသည်ယောက်ျားပြဇတ်ထဲက "ဘိန်းစားဆေးငတ် ဆေးမပြတ်သည့်နှယ်"
စသည်ဖြင့်တင်စားသုံးနှုံးပုံဖြစ်ပါတယ်။ သူ့မှာက metaphor ထက်ပိုပြီးတိုက်ရိုက်ကျတဲ့သဘော ရှိပါတယ်။ like, such as, as, as... as ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့သုံးပါတယ်။
He is likeamouse in front of the teacher.
He fights likealion.
as .... as ပုံစံတွေကတော့ အများကြီးပါပဲ။
As black as coal○
As black as pitch
As blind asabat
As blind asamole
As bold as brass
As bright asanew pin
As broad as it is long
Hyperbole haɪˈpɜrbəliː/ hy-pur-bə-lee; is the use of exaggeration asarhetorical device or figure of speech. It may be used to evoke strong feelings or to createastrong impression, but is not meant to be taken literally.
လိုချင်သည့်အချက်ကိုပေါ်လွင်အောင်ပြချင်လို့ဖြစ်စေ၊ သရော်ရာ၊ ဟာသရသမြောက်အောင်ရေးရာမှာဖြစ်စေအလွန်အကျူးဖွဲ့ဆိုခြင်းဖြင့် ထင်ရှားအောင်ပြတဲ့အနေနဲ့ရေးလေ့ရှိပါတယ်။ မကြာခဏကြားဖူးနေကျစကားလုံးတွေဖြစ်တဲ့ "မင်းကိုပြောတာအကြိမ်တစ်ထောင်လောက်ရှိပြီ" I've told youamillion times. အချုပ်တန်းဆရာဖေရဲ့
မန်းတုန်အောင် လမ်းဆုံက ဟစ်ချင်တော့"
“It was so cold, I saw polar bears wearing jackets” ဆိုတာမျိုးတွေပါ။
ကျောင်းသားတွေကတော့မကြာခဏအိမ်စာတွေတစ်ပုံကြီး "I hadaton of homework. " ညည်းလေ့တယ်။ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းကို "မင်းဦးနှောက်ကဖြုတ်လောက်ပဲရှိပါတယ်ကွာ" လို့ပြောချင်ရင် "Your brain is the size ofapea."လို့ပြောလို့ရတယ်။ ဦးပုညရဲ့ "သုံးစွဲမကုန်၊ တောင်နှယ်ပုံ၊ ငွေမှုန်လေးရွေး၊ ခြိမ့်အောင်ကြွယ်တဲ့ မယ်သူဌေးငယ်. . . .
အထည်အထုပ်၊ ငွေစသာဟုတ်ပါစေ၊ ဖြုတ်မျက်လုံးလောက် သေးလို့ပင်ပျောက်ကတဲ..." စတာလေးတွေခံစားကြည့်ကြပါဦး။
An onomatopoeia isaword that imitates or suggests the source of the sound that it describes.
ဂရိဘာသာ onomatopoiia ကနေလာတဲ့ စကားလုံးပြုလုပ်ခြင်းဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ရှိပါ တယ်။ မြည်တဲ့အသံကို ကြားရသလိုစာထဲမှာထည့်ရေးလိုက်တဲ့အခါ စာဖတ်သူရဲ့စိတ်ထဲမယ် စာထဲကနေရာကို ကိုယ်တိုင်ရောက်ရှိနေယောင် ခံစားရပါတယ်။ ငယ်ငယ်ကလေးဘ၀တုန်းက ဆော့ကစားခဲ့ကြတဲ့ "ဒေါက်ဒေါက် ဘယ်သူလဲ"
Knock-knock Who's there?
Don't cry, I was only joking ကိုမှတ်မိကြဦးမှာပါ။ မြည်သံစွဲစကားတွေကလဲအများသား။ ဒါပေမယ့် မြန်မာနားနဲ့အင်္ဂလိပ်နား မတူတဲ့အတွက်ကြောင့် စကားလုံးတွေလဲကွဲသွားကြပါတယ်။ ကျွန်တော့်အကြိုက်ဆုံး ဆရာကြီးမင်းသုဝဏ်ရဲ ဖိုးမောင်ကဗျာထဲက "ဒိုင်း-ဒုန်း-ဒိန်း သံရွာလုံးညံ၍" ဆိုတဲ့ သေနတ်ပစ်သံကိုတော့ အင်္ဂလိပ်တွေက bang လို့ကြားကြတယ်။ ကြက်ဖအော်သံ အောက်-အီး-အီး-အွတ် ကျတော့ Cockadoodle do doo တဲ့။
Honk Honk = ကားသံ ပွမ်ပွမ်
Giggle = ခစ်ခစ် (ရယ်သံ)
Meow = ညောင် (ကြောင်သံ)
Quack = ဂတ်-ဂတ် (ဘဲသံ)
The repetition of an initial consonant sound, as in "a peck of pickled peppers." Adjective: alliterative.
အစဗျည်းသံကိုယူပြီး ထပ်ကာထပ်ကာရေးဖွဲ့တာမျိုးပါ။ ရှင်ဥတ္တမကျော်ရဲ့ ဆယ့်နှစ်ရာသီတောလား ရတု ထဲက
"တိမ်ညိုမိလ္လာ၊ တိမ်စူကာနှင့်၊ တိမ်ပြာရောရှက်၊ မရန်းဘက်၍၊ တိမ်သက်တန့်ရောင်၊ အ၀ါပေါင်ဝယ်၊ မှောင်ခဲ့တခါ၊ ပြာခဲ့တချို့၊ ညိုခဲ့တလီ၊ ရီခဲ့တဖုံ၊ မှုံခဲ့တချက်" သံတူကပ်အလင်္ကာတွေသုံးထားတာ အင်မတန်မှ သာယာနာပျော်ဖွယ်ကောင်းပါတယ်။ Illiteration အတွက်အကောင်းဆုံးဥပမာကတော့ tongue twister တွေပါပဲ။
"I watched the bare brown back of the prisoner marching in front of me."
(George Orwell, "A Hanging," 1931)
Illiteration လိုမျိုးပဲ စကားလုံးတစ်လုံးတည်းကို ထပ်ကာထပ်ကာသုံးတာကိုကျတော့ Anaphora လို့ခေါ်ပါတယ်။
“What the hammer? what the chain?
Dare its deadly terrors clasp?”
အသံထွက်ရွတ်ဆိုကြည့်တဲ့အခါမှာ ကဗျာရဲ့အရသာ၊ စာဖတ်သူကို တစ်ဝက်နဲ့ရပ်လို့မရဘဲ အဆုံးထိတွန်းခေါ်သွားတဲ့ခွန်အားလေးတွေခံစားရမှာပါ။ မြန်မာစာပေမှာလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။ ရှင်မဟာရဌသာရရဲ့ မုတ္တာရွဲသီရေးနည်း နဲ့ရေးထားတဲ့ကဗျာတစ်ပုဒ်လည်းရှိပါတယ်။ မမှတ်မိတော့လို့ ထည့်မရေးနိုင်တာခွင့်လွှတ်ပါ။
A figure of speech in which incongruous or contradictory terms appear side by side;acompressed paradox.
သူလည်းစကားအလင်္ကာတစ်မျိုးပါပဲ။ တစ်ခါတစ်လေမှာ ဟာသရသပေါ်လွင်အောင် ဆန့်ကျင်ဖက် အနက်ဆောင်တဲ့စကားလုံးတွေကိုတမင်တွဲသုံးတဲ့လေ့ရှိပါတယ်။ အထင်ရှားဆုံးဥပမာကတော့ open secret လူသိများတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တဲ့။ လျှို့ဝှက်ပါတယ်ဆိုမှ ဘယ်လိုဖြစ်လို့ ဗျောင်ကြီးဖြစ်နေရတာလဲ။ စေ့စေ့တွေးလေ ပြုံးချင်လေပါပဲ။ အောက်က oxymoron တွေကိုကြည့်ပြီးစဉ်းစားကြည့်ကြပါဦး။
"The best cure for insomnia is to getalot of sleep."
အိပ်မပျော်တဲ့ရောဂါအတွက်အကောင်းဆုံးကုသနည်းကတော့ အိပ်ရေး၀၀အိပ်ဖို့ပါပဲ။ (အိပ်မပျော်ပါဘူးဆိုကာမှအိပ်ခိုင်းနေတယ်။)
"A yawn may be defined asasilent yell."
သမ်းဝေခြင်းဆိုတာတိတ်တခိုးအော်တာလို့မှတ်နိုင်တယ်။ (အော်ပါတယ်ဆိုမှ တိတ်တခိုးလုပ်လို့ရပါမလား။)
"I hate intolerant people."
"Health food makes me sick."
"That building isalittle bit big and pretty ugly."
(အင်္ဂလိပ်စကားလုံးalittle bit နဲ့ pretty တို့အဓိပ္ပါယ်နဲ့ယှဉ်စဉ်းစားပါ။)
တခြားပြုံးချင်စရာ oxymoron တွေပေးရင်းနဲ့ ဒီဆောင်းပါးလက်စသတ်လိုက်ပါတယ်။
76 members like this
Permalink Reply by Peaceangel on September 2, 2011 at 0:02
Great job, bro! You always share very nice articles... thank you so much and looking forward to read further articles from you... :)
Star MemberPermalink Reply by zar ni (My Way!) on September 2, 2011 at 8:58
Thank you for your compliment sister. Haveanice day.
Permalink Reply by moemoewin on September 2, 2011 at 10:48
Permalink Reply by u myo aung on September 2, 2011 at 11:29
Permalink Reply by Myint Wai on September 2, 2011 at 11:40
Permalink Reply by Linn Htut on September 2, 2011 at 12:23
Thank you so much,Ko Zar Ni.Let me copying and learning it. Your kind
Permalink Reply by 1c6w3mcutw6s0 on September 2, 2011 at 13:13
Ko Zar Ni
It isafriutful article for me . Thank you for sharing me.
Permalink Reply by 21w656dee40t3 on September 2, 2011 at 14:09
Thanks you for sharing me.Haveanice day.
Permalink Reply by sandar wai on September 2, 2011 at 14:18
combination, comparison, discussion, sharing, many many deeds..........
Permalink Reply by JAC on September 2, 2011 at 14:30
Euphemism ကိုလဲ အလင်္ကာစာရင်းထဲ တို့လို့ ရတယ် ထင်ပါတယ်။
Euphemism isasubstitution for an expression that may offend or suggest something unpleasant to the receiver, using instead an agreeable or less offensive expression or to make it less troublesome for the speaker.
thz for sharing
Star MemberPermalink Reply by zar ni (My Way!) on September 2, 2011 at 14:45
ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။ euphemism ဟာ periphrase တို့ Circumlocution ကိုအသုံးပြုပြီးဖန်တီးလေ့ရှိတယ်လို့ ဆိုတဲ့အတွက် figure of speech (အလင်္ကာ) လို့ဆိုနိုင်မှာပါ။ အနည်းဆုံးတော့ poetic device, literary device လို့ပြောနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။
Permalink Reply by HoneyHanthi on September 2, 2011 at 14:46